စျေးပေါသောစွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဆင့်ဓာတ်မြေသြဇာကြိတ်စက်စက်နှင့်စက်ရုံ | YiZheng
The Two-Stage မြေသြဇာကြိတ်စက် အဘယ်သူမျှမ - ဆန်ခါအောက်ခြေ crusher သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ကြိတ်ခွဲစက်အဖြစ်လူသိများ, ဒါကြောင့်ကြိတ်ခွဲအဆင့်ဆင့်သို့ခွဲခြားထားတယ်။ ကျောက်မီးသွေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားကဏ္inများမှအသုံးပြုသူများကကောင်းစွာခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ကြိတ်ခွဲစက်များဖြစ်သည်။
Two-Stage Fertilizer Crusher Machine ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
The Two-Stage မြေသြဇာကြိတ်စက် ရှည်လျားသောစိုထိုင်းဆကျောက်မီးသွေးဂိုဏ်း၊ ယှေလကျောက်၊ စင်တာနှင့်အခြားပစ္စည်းများအလွယ်တကူအလွယ်တကူဖြိုဖျက်နိုင်သည့်အမျိုးအစားသစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်ကြိတ်ခွဲစက်သည်ရေရှည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်လူတန်းစားပေါင်းစုံမှလူများ၏ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစက်သည်ကျောက်မီးသွေးမှု၊ shale၊ slag၊ slag, slag ဆောက်လုပ်ရေးစွန့်ပစ်စသည့်ကုန်ကြမ်းများကိုကြိတ်ခွဲရန်သင့်လျော်သည်။ အမှုန်အရွယ်အစားသည် ၃ မီလီမီတာအောက်သာရှိသည်။ အုတ်အတွက်အပိုပစ္စည်းများနှင့်အတွင်းပိုင်းလောင်စာအဖြစ် gangue နှင့် cinder ကိုအသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။ စက်ရုံများ၊ ၎င်းသည်နှိပ်စက်ရန်ခက်ခဲသော gangue၊ shale, အုတ်များ၊ အပူကာကွယ်နိုင်သောနံရံပစ္စည်းများနှင့်အခြားမြင့်မားသောအပူချိန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုကိုဖြေရှင်းသည်။
စီးရီးတွင်ချိတ်ဆက်ထားသောရဟတ်နှစ်စုံသည်အထက် - အလှ rotor အားဖြင့်နှိပ်စက်ခြင်းကိုမြန်ဆန်စွာလှည့်နေသောအနိမ့်အမြင့် rotor ၏တူခေါင်းဖြင့်ထပ်မံနှိပ်စက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ အတွင်းလိုင်အတွင်းရှိပစ္စည်းများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလျင်အမြန်တိုက် မိ၍ တူအမှုန့်နှင့်အမှုန့်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အရှိန်ပြင်းစွာဖြတ်သန်းသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပစ္စည်းကိုတိုက်ရိုက်ချလိမ့်မည်။
Two-Stage Fertilizer Crusher စက်ကိုအသုံးပြုသည်
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်: 1-10t / h
အစာကျွေးမှုအရွယ်အစား - mm80mm
သင့်လျော်သောပစ္စည်းများ: Humic acid, နွားချေး၊ ကောက်ရိုး၊ သိုးမွှေး၊ ကြက်ချေး၊ ရွှံ့နွံ၊ ဇီဝဓာတ်ငွေ့အကြွင်းအကျန်၊
၂။ မျက်နှာပြင်၊ ဆန်ခါအောက်ခြေ၊ စိုထိုင်းဆမြင့်မားသည့်အရာ၊
၃။ နှစ်ဖက်လှည့်သော Two-rotor အပိုင်းအစကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ကြီးမားသောထွက်ရှိမှု၊ အမှုန်အရွယ်အစားသည် ၃ မီလီမီတာအောက်တွင်ရှိသည်။ ၂ မီလီမီတာအောက်လျော့နည်းပြီး ၈၀% ကျော်ရှိသည်။
4. ဝတ်ဆင် - ပေါင်းစပ်သံတူ။
6. ဟိုက်ဒရောလစ်လျှပ်စစ် starter အိမ်ရာ။
Two- အဆင့်ဓာတ်မြေသြဇာ Crusher စက်မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေး
၁၅ + ၁၁
ရှေ့သို့ ဒေါင်လိုက် Chain ဓာတ်မြေသြဇာစက်
နောက်တစ်ခု: Double-axle Chain Crusher Machine Fertilizer Crusher
နိဒါန်း BB Fertilizer Mixer စက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ BB ဓာတ်မြေသြဇာရောနှောစက်သည်အစာထည့်သည့်စနစ်ဖြင့်သွင်းအားစုပစ္စည်းများဖြစ်သည်၊ သံမဏိဘင်သည်အအေးခံသို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်သည့်ပစ္စည်းများနှင့် BB ဓာတ်မြေသြဇာရောနှောမှုကိုအထူးအတွင်းပိုင်းဝက်အူယန္တရားနှင့်ထူးခြားသောသုံးဖက်မြင်ဖွဲ့စည်းမှုမှတစ်ဆင့်တက်သည်။